Ny metatra glucose amin'ny ra tsy manafika amin'ny hato-tanana dia zava-misy ankehitriny | Avy amin'ny mac aho
Volana vitsivitsy lasa izay dia nisy resaka momba ny «fanavaozana» fiasa vaovao izay hampiditra azy ireo amin'ny ho avy Apple Watch. Io no fandrefesana ny haavon'ny glucose ao anaty ra, amin'ny fomba tsy manafika, amin'ny fampiasana sensor optika, toy ireo izay ampiasaina ankehitriny handrefesana ny fihenan'ny fo sy ny haavon'ny oxygen ao amin'ny ra.
Ary hoy aho hoe "revolisionera" satria hatramin'izao dia mbola tsy nisy fitaovana elektronika afaka refesina ny haavon'ny siramamy ao anaty raha tsy tamin'ny santionan'ny ra. TSARA Rockley photonics vao nampiditra azy. Ary Apple "mahaliana" no mpanjifa tsara indrindra ...
Volana vitsivitsy lasa izay naneho hevitra izahay fa ny Apple Watch ho avy (angamba ny andiany 8) dia afaka mandrefy haavon'ny glucose amin'ny ra tsy manafika, amin'ny alàlan'ny fampidirana sensor vaovao vaovao mitovy amin'ireo ampiasaina ankehitriny handrefesana ny tahan'ny fo sy ny haavon'ny oxygen ao amin'ny ra.
Fisalasalana maro no noforonina tamin'io lafiny io, satria tsy misy fitaovana elektronika eny an-tsena amin'izao fotoana izao mahavita mandrefy toy izany raha tsy mahazo rà iray latsaka ary atsoboka ao anaty réagent.
Eny, Rockley Photonics, a mpamatsy Apple dia namoaka rafi-pandrefesana nomerika mandroso izay azo ampidirina ao amin'ny Apple Watch ara-potoana, ary mampiditra refy vaovao marobe avy amin'ny angona samihafa mifandraika amin'ny fahasalamana.
1 Rafitra sensor optika tsy manafika
2 Apple no mpanjifa lehibe indrindra an'ny Rockley Photonics
Rafitra sensor optika tsy manafika
Ny orinasa dia nanambara ny rafi-pandrefesana nomerika momba ny fahasalamana nomerika 'wrist Clinic' izay ahafahan'ny fitaovana azo ovaina manara-maso biomarker marobe, ao anatin'izany ny mari-pana ao amin'ny vatana, ny tosidra, ny hydration amin'ny vatana, ny alikaola, ny lactate ary ny haavon'ny glucose.
Ny teknolojia dia mampiasa chip kely kely sensor sensor izay manome fanaraha-maso mitohy sy tsy manafika ny biomarker isan-karazany. Natao handresena ny maro amin'ireo fanamby mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny fahasalamana izy ireo ary hialana amin'ny filàna sensor manimba izay tsy maintsy manindrona ny hoditra hahazoana santionana amin'ny rà.
Ny rafitra dia hampiasa sensor optika toy ireo ankehitriny izay mandrefy oxygen oxygen sy pulsations.
Ny akanjo azo anaovana akanjo maro dia mampiasa LED maintso hijerena ny tahan'ny fony, fa ny sensor an'i Rockley kosa dia mampiasa spektrofotometra infrared izay afaka mamantatra sy manara-maso biomarker marobe lavitra kokoa mba hampitomboana be ny fiasan'ny fitaovana azo ampiasaina. Ny sensor dia miteraka laser amin'ny famotopotorana tsy manafika ambanin'ny hoditra mba hamakafaka ny ra, ny tsiranoka interstitial ary ny sosona dermis ho an'ny singa manokana sy ny tranga ara-batana.
Rockley dia nanangana ny vahaolana detection am-boalohany tamin'ny fehin-tànana izay misy ny modely sensor ary mifandray amin'ny app amin'ny smartphone. Izy io dia hampiasaina amin'ny andiana fandalinana ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny volana ho avy, ary ny hevitry ny orinasa dia ny hamidy ny rafitra miharo amin'ny fomba samihafa. wearables.
Apple no mpanjifa lehibe indrindra an'ny Rockley Photonics
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia naseho fa Apple no mpanjifa lehibe indrindra avy amin'i Rockley Photonics. Ny filazan'ny orinasa dia nilaza fa ny Apple dia nitahiry ny ankamaroan'ny fidiram-bolany tao anatin'ny roa taona lasa ary manana "fifanarahana famatsiana sy fampandrosoana" maharitra miaraka amin'ny orinasa izy, ary antenaina ny hiantehitra betsaka amin'i Apple amin'ny ankamaroan'ny karamanao. .
Raha jerena ny fitomboan'ny Rockley Photonics sy ny haben'ny fiarahamiasan'i Apple amin'ilay orinasa dia toa azo inoana tokoa fa ny teknolojia sensor an'ny fahasalamana an'ny orinasa dia handeha ho any Apple Watch haingana kokoa fa tsy taty aoriana, raha toa ka mifanaraka amin'ny fenitra ny teknolojia. fanantenana. Nilaza i Rockley teo aloha fa ny sensor dia mety amin'ny famantaranandro marani-tsaina sy ny fitaovana elektronika hafa hatramin'ny fiandohan'ny taona ho avy, ka azo ampidirina amina modely. Apple Watch Series 8.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Zava-misy ankehitriny ny metatra gliokaozy ra tsy manafika
Jesus Vitela Mena dia hoy izy:
Toa fanavaozana tena tsara ho ahy izany satria efa leo manetsika ny rantsan-tanantsika tokoa isika, liana amin'izany aho, azoko tsara raha ampahafantarinao ahy foana izany.
Misaotra anao aho
Valiny tamin'i Jesús Vitela Mena
Hampahafantarina anao raha ny momba ahy. Diabeta koa aho. Mila manam-paharetana anefa isika. Toa ny rafitra dia ho afaka ampidirina amin'ny akanjo azo araraotina amin'ny 2022 ...
Serena dia hoy izy:
Taona vitsivitsy lasa izay dia nisy karazana famantaranandro koa izay nanara-maso ny glucose amin'ny ra.
Any Etazonia Tany Argentina dia tsy hitako izany.
Mahagaga fa tsy vitan'ny mbola tsy misy fitsaboana io, fa mbola tsy nisy fandrosoana firy tamin'ity fitsaboana manafika ity. Ho an'ny zazalahy indrindra.
Valiny tamin'i Serena
Afaka nahazo ny studio A24 indie tamin'ny vidiny 2.500 miliara euro i Apple